[Ingxenye Yesibili] I-LMDE ngokujula: Ukuvuselelwa kwesistimu. | Kusuka kuLinux
[Ingxenye Yesibili] I-LMDE ngokujula: Ukuvuselelwa kwesistimu.
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ukusatshalaliswa, I-GNU / Linux, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Siyaqhubeka ngesitolimende sesibili se- I-LMDE kahle. Sivele sabona ungayifaka kanjani igxathu negxathu, futhi manje sekuyisikhathi sokuyibuyekeza ukuze ukwazi ukujabulela amaphakheji wakamuva atholakalayo.
Ngaphambi kokuqala kufanele sikucacise lokho I-LMDE yakhelwe ukusebenzisa izinqolobane ze- Ukuhlolwa kwe-Debian, futhi sizosebenzisa ezenzakalelayo ezilungiselelwe kufayela imithombo.luhlu okungaphakathi / njll / apt /.
Ngenza lokhu kucaciswa, ngoba muva nje iqembu le I-LinuxMint, Ishintshe ezinye izinto ngendlela yokuvuselela I-LMDE. Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngale ndaba, ungathola eminye imininingwane okwamanje lesi sixhumanisi.
Ngemuva kokufaka I-LMDE kufanele siyivuselele ngoba .iso etholakala kuze kube manje, iyakhiwa ngenyanga kaJanuwari futhi kunamaphakeji amaningi angasebenzi. Njengoba ngishilo ngaphambili, sizosebenzisa izinqolobane eziza ngokuzenzakalela nezilungiselelwe ku- /etc/apt/sources.list.
Lelo fayela kufanele libe nokulandelayo kulo:
deb http://packages.linuxmint.com/ ukungenisa okuyinhloko okuphezulu kwe-debian
# deb http://ftp.debian.org/debian ukuhlolwa okuyinhloko kunikela okungekho mahhala
deb http://debian.linuxmint.com/latest ukuhlolwa okuyinhloko kufaka isandla ngaphandle kwamahhala
deb http://security.debian.org/ testing / updates main don non-free
deb http://www.debian-multimedia.org main main testing non-free
Ukwenza ukuvuselelwa kujabulise kakhulu kumsebenzisi we-novice, sizokwenza konke ngokusebenzisa I-Synaptic, Esikwenzayo kufayela le- Imenyu »Umphathi wephakheji. Sivele sikhombisile ukuthi ungasebenza kanjani naleli thuluzi, ngakho-ke uma ungazi, kufanele weqe lapha.
Kungase kungaceli iphasiwedi yethu ukuthi ibe namalungelo okuphatha. Ngeke kudingeke senze noma yini enye, mane uchofoze inkinobho yokuvuselela ukuqala ukubuyekeza amaphakheji. Njengoba kunengqondo, kuzofanele sixhumeke kwi-inthanethi.
Isikhathi le nqubo ethathayo sizoncika kumkhawulokudonsa wethu. Okwamanje asikafaki amaphakheji amasha, kepha kunalokho sibuyekeza izinkomba zokugcina. Uma sekuphelile, siyabona kufayela le- Isimo sephakheji, engabuyekezwa.
Kumele nje siwakhethe wonke futhi siwavuselele. Ukwenza ukukhetha okuningi, simaka owokuqala bese ucindezela Ctrl + A.
Kepha ngiphakamisa ukwenza enye into. Muva nje I-LMDE ifakiwe entsha Buyekeza iMenenja que ukuthuthuka okuningi. Engikuphakamisayo ukuthi, buyekeza kuphela nge I-Synaptic, amaphakheji ahlobene ne- I-LMDE.
Sikwenza kanjani lokhu? Kulula kakhulu, sisebenzisa injini yokusesha, futhi sikuhlunga ukusesha ngamagama. Sifaka iminti emkhakheni wokusesha bese silinda wonke amaphakheji aqukethe ukuze avele Mint egameni lakhe.
Simaka wonke amaphakheji we-mint ukuvuselela. Uma sekuphelile, siyavala I-Synaptic bese sivula Buyekeza iMenenja, okuku- Imenyu »Zonke izinhlelo zokusebenza» Ukuphatha. Silinde wena ukuthi ulande izinkomba zokugcina futhi uvuselele wonke amaphakheji.
Kuze kube manje inkinga yesibuyekezo. Esitolimende esilandelayo sizobona ukuthi singazilungisa kanjani I-LMDE ukuyenza isebenze kangcono kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » [Ingxenye Yesibili] I-LMDE ngokujula: Ukuvuselelwa kwesistimu.
Uma ngemuva kokungeza ama-repos lapho ufuna ukwenza isibuyekezo sokuthola kahle noma ukuvuselelwa kokufaneleka kusitshela ukuthi:
Ifayela «Ukukhishwa» seliphelelwe yisikhathi, liziba http://debian.linuxmint.com/latest/dists/testing/InRelease
Isixazululo ukudala ifayili /etc/apt/apt.conf.d/80mintupdate-debian
Zuza :: Hlola-Kuvumelekile-Kuze kube "ngamanga";
Manje usungabuyekeza i-database ngaphandle kwezinkinga
Ngiyabonga kakhulu ngomnikelo 😀
Sawubona ngiyabonga ngokufaka kepha ulakha kanjani lelo fayela?
Ngafaka inguqulo yeXfce kepha nginezinkinga namaphakeji. Ngikwenze konke okushiwo yilokhu okuthunyelwe futhi uhlelo lwami lwaphahlazeka: alusavuselelwa futhi lwakhombisa amaphutha kukhonsoli lapho ngizama ukusebenzisa "ukuvuselela" kanye "nokuthuthukisa".
Noma kunjalo, bekufanele ngifake kabusha futhi manje ngizoqapha kakhulu.
Ungayakha ngesihleli sombhalo bese uyibeka lapho njengezimpande. Angazi ukuthi idalwa kanjani ne-terminal
Uyifakile nini leyo nguqulo? Ngiyakukhumbuza ukuthi i-LMDE isivele inezinqolobane zayo ..
Kulezi zinsuku ezintathu zokugcina, bengilokhu ngihlola futhi ngihlola. Ngafaka iLxde kuqala, kepha uDebian waphuma ngafaka iXfce. Ngemuva komonakalo engiwuchaze emazwini ami angenhla, ngazama iGnome kepha ukufakwa akukaze kuqale. Ngibuyisele kabusha iXfce futhi ngazama ukususa ukusesha kweLinux Mint kuFirefox, ngaphinde ngasilungisa kahle isistimu. Ngalesi sikhathi ngibuyisele kabusha kuma-partitions akhona futhi nakhu ngiya.
Ngijabule kakhulu ngeLinux Mint 201109 yeXfce. Le deskithophu ithuthuke kakhulu futhi ingivumela ukuthi ngiphinde ngiyisebenzise kabusha le ebengiyisebenzisa ne-Ubuntu 10.10. Isibonelo, isivele isekela ama-desktops amaningi futhi i-applet iyafana neGnome. Ngaphezu kwalokho, ikuvumela ukuthi ususe kalula ukushayela kwangaphandle. Ngikhumbula nje ukuthi eNautilus, ukucindezela i-F3 kungasebenza ngamafayela amabili windows kwelinye.
Konke lokhu kuyingxenye yokufunda nokuzijabulisa kokusebenzisa i-Linux. Angikhonondi ngezinkinga esengike ngahlangabezana nazo, ziyingxenye yenqubo. Kunalokho, bangisizile ngafunda okwengeziwe. ILinux ivula ingqondo yakho impela futhi ikuvumela ukuthi ukhululeke.
Okokugcina, ngifuna ukubonga u-Elav no-Courage. Ngiyabonga kakhulu ngemibono nangosizo lwakho. Futhi u-Elav, ngiyakukhuthaza ukuthi uqhubeke nokwabelana nomphakathi okhuluma iSpanishi ngazo zonke izinzuzo zeLinux futhi, ikakhulukazi iLinux Mint. Uyingxenye yabasebenzisi abaphambili nabachwepheshe sibonga thina thina, "esingafundile" ku-Linux, esingathemba futhi sithuthukise ukusebenza kwethu kwekhompyutha.
Akukho lutho ndoda, uma unginika umsebenzi akwenzeki lutho, yileyondlela engizijabulisa ngayo.
Ngizoba khona lapho engingasiza khona